Tsy ho afaka hividy ny iMac 21.5-inch ao amin'ny Apple ianao | Avy amin'ny mac aho
Manuel Alonso | | iMac, About us
Toa efa tonga ny fotoana atahoran’ny maro. Taorian'ny nanombohan'ny iMac 24-inch miaraka amin'ny M1 sy ny paikadin'i Apple amin'ny famadihana ny solosainy rehetra ho Apple Silicon, dia nanana ny androny ny Intel. Ankehitriny dia anjaran'ny iMac 21.5-inch izany tsy ho afaka hividy intsony ianao, farafaharatsiny amin'ny alàlan'ny fivarotana an-tserasera Apple. Heverintsika fa tsy amin'ny fizika.
Tamin'ny taona 2021, tamin'ny volana martsa, dia efa nihena ny fitahirizana sy ny tanjaky ny herinaratra ao amin'ny iMac 21.5 santimetatra. Tamin'ny volana aprily, nihena ny tahiry noho ny fandefasana ny iMac 24-inch. Noho izany, na dia mety ho tamin'ny fomba tena malina aza, ny modely iMac kely indrindra ao amin'ny Apple dia ny 24-inch vaovao sy miloko miaraka amin'ny M1. Raha tianao ny modely 215 dia tsy maintsy mandeha any amin'ny fivarotana antoko fahatelo ianao, satria tsy mivarotra an-tserasera intsony i Apple ary tsy fantatsika raha manana an'io modely io amin'ny fivarotana ara-batana izy ireo. Izao dia izao, ny iMac an'ny 27 ihany no mijanona ho tokana an'ny Intel ary efa fantatsika izay hanjo azy. Raha tanteraka ny tsaho, amin'ny taona 2022 dia hanao veloma an'ity modely ity ihany koa izahay.
Somary mahaliana ihany, satria raha mila iMac lehibe ianao dia tsy afaka mividy ny iray amin'ny Intel afa-tsy ny mahafantatra fa afaka herintaona dia hivoaka miaraka amin'ny M1 ny fanavaozana azy ary ny anao dia ho lany andro. Raha mila iMac maoderina ianao, miaraka amin'ny M1. manana safidy 24-inch ihany ianao. Kely ny azo isafidianana, farafaharatsiny hatramin'ny 2022. Heveriko fa tokony hamoaka modely iMac vaovao roa miaraka amin'ny chip M1 Pro sy M1 Max vaovao i Apple. 21.5 sy 27 santimetatra.
Ny fiainana dia fivoarana ary amin'ny fitaovana ara-teknolojia dia miharihary kokoa sy haingana kokoa izany. Araka ny lazain'izy ireo, Maty ny Mpanjaka. Ho ela velona ny Mpanjaka!".
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » About us » Tsy afaka mividy ny iMac 21.5-inch amin'ny Apple intsony ianao
Servant Season 3 Trailer Voalohany azo alaina izao